Google Consumer Ongororo yeMarket Ongororo uye Kugutsikana Webhusaiti | Martech Zone
Chitatu, June 26, 2013 Chipiri, June 25, 2013 Douglas Karr
Google ikozvino inopa Google Consumer Ongororo yeMarket Ongororo uye Varidzi veWebhusaiti. Ini handisi mutsigiri mukuru wemakambani ari kugadzira avo ongororo, zvakatonyanya kuita vatengi makambani enjere vanotsvaga nekuvandudza nzira dzekutora ruzivo rwakakwana. Mumwe munhu ari kurovera mibvunzo yakati wandei pafomu anozvipira kusundira bhizinesi rake munzira isiri iyo nekuda kwenzira yavanobvunza uye kuwana mhinduro. Chenjerera.
Google Consumer Surveys chimbi chimbi, chinodhura, uye chakaringana chekutsvagisa musika chinokubatsira iwe kuita sarudzo dzine ruzivo nezvebhizimusi nekubvunza vashandisi veinternet mibvunzo yekuongorora. Vashandisi vanopedzisa mibvunzo yekuongorora kuitira kuti vawane zvemukati zvemhando yepamusoro pawebhu, uye vaparidzi vemukati vanobhadharwa sevashandisi vavo vanopindura. Google inozvibatanidza uye inoongorora mhinduro kuburikidza neinternet interface.
Kune Varidzi veWebhusaiti - Ongororo yekugutsikana yemahara inoiswa zvakananga pawebhusaiti yako kuti ugone kuwana mhinduro kana iri pamusoro pefungwa. Kuti ushandise iyo yekugutsikana ongororo, ingo teedzera uye unama kodhi snippet mune peji raunoda kuongorora vashandisi vako. Ivo vanopa yepamwedzi yekugutsikana tracker yemahara, uye iwe unogona kugadzirisa mibvunzo yeinongori 1 muzana pamhinduro.
Zvekutsvaga Kwemusika - Gadzira ongororo mumaminetsi uye kuwana padyo padyo neGoogle-inofambiswa nemishumo, machati, uye njere. Tora huwandu hwakakosha, mhedzisiro inoshanda pachiyero kubva kuvanhu chaivo, kwete akarerekera mapaneru.
Iwe unogadzira online ongororo kuti uwane mutengi nzwisiso.
Vanhu vanopedza mibvunzo kuitira kuti vawane zvemukati zvemukati.
Vaparidzi vanobhadharwa sezvo vashanyi vavo vachipindura.
Iwe unowana zvakanaka kuunganidzwa uye kuongororwa data.
Iwe unogona zvakare kuteedzera mhinduro biweekly kana pamwedzi yekuongorora maitiro.
Mitengo: Tarisa mumiriri wemuenzaniso weUS, Canada, kana UK Internet huwandu hwevanhu $ 0.10 pamhinduro kana $ 150.00 yemhinduro gumi neshanu (yakakurudzirwa kukosha kunoverengeka). Kana iwe uchida kukamura muyenzaniso kuwanda, iri $ 1500 pamhinduro.
Tags: kuongorora kwevatengigoogle mutengi ongororogoogle ongororosurvey